UMichael P. Thijs H. Jos B. onke amatyala eendaba zokubulala abantu asenza ukuba kungeniswe ngokukhawuleza umthetho wokhathazeka ochaphazela wonke umntu: uMartin Vrijland
Izolo sabona umboniso weendaba nge-Anne Faber, apho "uyise ka-Anne" athetha khona. Enyanisweni, bekuyinto engqubuzana ngayo ukugqitywa kwamalungelo amaninzi kangangoko kunokwenzeka kumbulali onyantyantya njengoMichael P. "Uyise ka-Anne" uthukuthele kangangokuthi akayi kucinga ukuba uMichael P. uyazibulala.
Ndibeka isihloko esithi "uyise ka-Anne Faber" kumanqaku-quotation, kuba ukuba sisebenzisana apha kunye ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) apho u-Anne ekhohliwe ngeendlela zobugcisa obunzulu, u-Anne Faber akakho kwaye kwimeko apho uyihlo umdlali (njengomama, umalume, umhlobo, njl.). Asinakuze sitsho ngokuqinisekileyo nge-100% nokuba intetho enjalo inkundla ngokwenene inkulumo kwinkundla okanye ingaba sibukele ukuveliswa kwe-ANP uJohn de Mol TV kunye neentlanzi.
Iimpawu zokufakela iteknoloji yinto yokuba unokudala umntu ukuba angene kwi-AI (iinkqubo zobulumko). Unokuhlanganisa yonke imbali, kuquka iifoto namavidiyo. Le nto isele ilula kakhulu kwesoftwe yanamhlanje ukuba sele sele ivele ivenkile yezorhwebo kwiimarike ezisebenzisa iinxalenye zezobuchwepheshe kwiintlobo ze-smartphone zokusebenza.
Ngokomzekelo, unokubamba udliwano-ndlebe kunye nomdlali kunye nokugqithisa ilizwi kunye nesinye somnye (okanye ngokungena kwi-video). Akukho mntu uya kubona ummahluko. Unokwenza okufanayo kunye neenkcukacha zentlalo yoluntu kunye nenethiwekhi yabo yabahlobo. Yakha amaphrofayili, epheleleyo kunye nezintlu zomhlobo, iimpendulo zomhlobo. iifoto kunye namavidiyo, ungayisebenzisa njenge umkhosi we-troll obeka iliso kwiingxoxo zeendaba zentlalo. Laba "abantu" esibabonayo kubonakala kwiingxoxo kwi-Facebook nakwiifom. Abantu abathi bazi ixhoba okanye bayazi umntu owaziyo kakuhle umntu okanye ubekho eklasini; nketera. Lo ngumkhosi we-troll onokubeka iliso kwi-PsyOps kwi-intanethi kwiingxoxo.
Kwiimeko zamatyala ezokubulala namhlanje, sibona kwasekuqaleni ukuba zenzelwe ukudlala abantu ngendlela yokuba bafumana umthetho omtsha abangaqhelekanga ngawo. Ngaphakathi eli nqaku Ndiyichaza ukuba ngokucacileyo (kubandakanywa nencazelo malunga ne-depthfakes).
Kuzo zonke iimeko zika-Anne Faber, u-Nicky Verstappen, uMichael Panhuis, uThjs H., uJos Brech (okanye nawaphi na amagama oku kubhalwe kwimemori yakho), sihlala sibona ukuba kukhokelela kumthetho omtsha ongekho ngaphandle kwala macala okubulala mpe mbelelo. Kwinqaku elikhankanyiweyo (nqakraza kwikhonkco) Ndichaza indlela i-PsyOp ibalulekileyo ngayo i-maxim Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo isetyenziswe ukunyusa umthetho omtsha. Ndiyabonisa ukuba kulula kangakanani umntwana ukuba uhlanganise i-PsyOp kunye neendlela zamanje zobugcisa. Udala, njengokuba kunjalo, ingxaki eyenziwe yedwa (inkundla yokubulala inempembelelo enkulu), udlala abantu ngezinga elikhulu ngokusebenzisa amajelo kwiimvakalelo zabo, ukwenzela ukuba zilungele ukungena kwisigaba sokugqibela; abo bakwamkela umthetho wokukrakra bona bona ngokwabo banokuthinta.
Icala le-Thijs H. kufuneka liholele ekupheliseni ubufihlakele bezobugcisa kumaziko apho abantu 'banonophelo lwempilo yengqondo', kuba uTjjs H. ephika ukubulala, kodwa wafika ngezandla zamagazi kunye nezambatho kwiziko leGGZ iViverdal eHeerlen. Ngoko kukho ubungqina, kodwa oko kusemgangathweni kaThijs H. kwintetho yesifo sengqondo kwaye akavumelekanga ukuba athethe nantoni na. Kule PsyOp kubonakala ngathi yinto yokumisa eyenziwe ngamabomu apho uTejs H. akakwazi ukugwetywa ukuba umfo-mpilo akaphuli umsebenzi wakhe wokufihla. Yiloo nto leyo i-PsyOp ifanele iholele kuyo: ukupheliswa kobufihli bezobugcisa. Icala likaTejs H. liya kunceda ukuqinisekisa ukuba abantu abaphazamisayo bayakuvalelwa ukuba babone ngaphandle kokunika isizathu kwaye kungenangenelelo yesazi sengqondo ( Ityala likaEdith Schippers).
I-Anne Faber - Icala likaMichael P. kufuneka likhokele ekuwamkelweni komthetho ngokumalunga nokugwetywa kwe-TB ngaphandle kokuba ummangali ofuna ukusebenzisana nophando lwengqondo. Kwakhona kufuneka ukuba kukhokelela ekuboneleleni ngonaphakade (TBS) kwaye mhlawumbi kwanokupheliswa kwelungelo lokubhena. Umnqweno wokupheliswa kwelo lungelo lifihliwe kwiingqinisiso zengqondo zomhlobo ka-Anne Faber (Nathan Fidder). Igqwetha lakhe lathetha.
Icala laseJos Brech kwakufuneka likhokele ekuvunyelweni kokusetyenziswa kwe-DNA, apho i-DNA yafunyanwa kwimeko ehlukile kunokuba ummangali ufuna. Enyanisweni, kwakungeniswa kwelungelo lokuthengwa kwe-DNA ngokungenakuvinjelwa kunye nokusetyenziswa okungagwenywanga kwimiba esemthethweni. Ukongezelela, abantu baye baziswa ngokubanzi nangaphezulu kwimodi yokwamkela ukudala iNational DNA database (bona apha ingcaciso).
In nqaku ekhankanyiweyo, apho ndinika inkcazelo ebanzi malunga nokudalwa kwabalinganiswa, ndichaza ukuba i-ANP (i-General General Press Office) isezandleni zomvelisi wethelevishini. Sithetha ngo-billionaire uJohn de Mol. Ngoko akufanele ukuza kumangaliswa kukuba xa ubona imifanekiso kumajelo eendaba, ezi ziveliso nje zefilimu. Konke kukhawuleza kwaye kulula ukudala ngeekhompyutha kunye nezobugcisa. Umbukeli akakuboni oku kwaye ucinga ukujonga kwiindaba ezilungileyo. Yiloo nto oyenzayo ekusebenzeni kakuhle kwengqondo. Okwangoku, abantu baqinisekisiwe ngamajelo afanayo ukuba iindaba zobuxoki kunye namabutho aseTroll kuphela avela eRashiya, kwaye ngoko wonke umntu uthemba amaphephandaba kwakhona.
Nangona kunjalo, kungenzeka ukuba uAnn Faber akazange abekho, kodwa uvelisa umveliso.
Uludwe lwekhonkco lovimba: nu.nl, 1limburg.nl
tags: Anne, nzulu, deepfakes, Faber, Fidder, sibheno, Michael, UNatan, P., I-Pan indlu, tbs, ubawo, ngumhlobo
30 Meyi 2019 kwi-09: 08
Hey John de Mol! Ukuba kamva siphila entolongweni yedijithali yesigxina, kunye nenkululeko yokukhawulelana nomthetho, apho abantu abangenalo inceba banokuphelelwa khona kwi-gulag kwaye bonke abantwana bethu bangabantu abaphula umthetho, ngaba sinokuza sikuxoshe kwiidolophu zakho ezinkulu?
5 Juni 2019 kwi-12: 27
Die Gorsse Lüge: qhubeka uphinda ubuxoki kwaye wonke umntu uya kukholelwa.
Kwaye ke i-PsyOp spin oogqirha bavele baphumelele ukuphuma:
5 Juni 2019 kwi-18: 20
Hayi, nantoni na eyenzekayo eMadurodam. Okungenakwenzeka, kwenzeka ukuba akunakwenzeka.
Kuxhomekeke kwiiDokotela zeeNtsholongwane, kwaye nje uqondisa ...
« UDavina Michelle i-transgender elandelayo kwi-Eurovision Song Contest? UDuncan Laurence ubona u-candidacy!
Ikhonsathi emnandi kaMarco Borsato eKuip eRotterdam! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.042.753